कोरोना भाइरसबाट पाठ सिकेर अब आउने महामारीका लागि विश्‍व तयार हुनुपर्छ : WHO महानिर्देशक डा. टेड्रोस - Rajmarga
कोरोना भाइरसबाट पाठ सिकेर अब आउने महामारीका लागि विश्‍व तयार हुनुपर्छ : WHO महानिर्देशक डा. टेड्रोस
भदौ १३, काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले कोरोना महामारीबाट पाठ सिकेर अब आउने महामारीका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार डब्लूएचओको मुख्यालय जेनेभामा भएको भर्चुअल मिडिया ब्रिफिङका क्रममा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले अब विश्वका सबै देशले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोरोनाले विश्वलाई पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै टेड्रोसले भने, ‘कोरोनाले सिकाएको एउटा कुरा के हो भने स्वास्थ्य भनेको विलासिताको बस्तु होइन । यो आवश्यकताको कुरा हो र यो एउटा मानव अधिकार हो ।’
उनले कोरोना नै अन्तिम महामारी नहुने उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि विश्व तयार रहनुपर्ने पनि बताए छन् । ुयो नै अन्तिम महामारी हुँदैन, इतिहासले बताउँछ कि महामारी हाम्रो जीवनको वास्तविकता हो । अर्को महामारीका लागि पहिलेभन्दा धेरै राम्रो तयार हुनुपर्छ,ु उनले भने । उनले केही देशले सार्स, मर्स, पोलियो, इबोला र फ्लुलगायतका महामारीबाट सिकेर तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेको बताए । केही देशले मेडिसिनका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै महानिर्देशक टेड्रोसले धेरै देशले भने आधारभूत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हेलचेक्य्राइँ गरेको बताए ।
महानिर्देशकले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा कम्बोडिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, रुवान्डा, सेनेगल, स्पेन, भियतनामलगायतका देशले अत्यन्तै प्रभावकारी कदम चालेको बताए । महामारी नियन्त्रणका विषयमा जर्मनीबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिने उनले बताए । ‘जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले सन् २०२६ सम्ममा जर्मनीको जनस्वास्थ्यमा ४ अर्ब युरो लगानी गर्ने कुरालाई म स्वागत गर्छु’, उनले भने, ‘म सबै देशलाई जर्मनीको उदाहरण हेर्दै जनस्वास्थ्य र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछु ।’
Previous post: कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई कोरोना संक्रमण
Next post: कोरोनाबाट सिर्जित मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न तत्काल योजना बनाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन